Ọdịnihu njem | Save A Train
Home > Travel Europe > Ọdịnihu njem
(Emelitere ikpeazụ On: 19/09/2020)
Transportation, n'ụdị ọ bụla, bụ agbaala mba ọ bụla na akụnụba ya. Ọ bụ naanị n'okporo ụzọ, okporo ígwè, ma ikuku anyị siri nwee ike ijikọ ụwa n'ụzọ ọ pere mpe karịa ka ọ dị. N'ihi ya, mgbe anyị na-elele ụlọ ọrụ ndị isi n'ụwa niile, ụgbọ njem bụ otu n’ime ndị kacha arụ ọrụ, na-agbanwe agbanwe mgbe niile maka ọdịmma nke ọdịnihu anyị.
Udiri ndi ohuru na njem njem ha na njem ha abukwo uzo ha di ihapu ahihia ndi ozo. Mgbaghari nke ichoro iji chekwa gburugburu anyi, Ihe ohuru ohuru nke njem abanye ugbua na-aru oru na usoro a. Otú ọ dị, ọganihu ndị a na-akụghasịkwa ókè anyị si eme njem kemgbe narị afọ gara aga. Site na ime nke a, ha na-eduga anyị na njem nke ga-adị ọsọ ọsọ, odi mfe, ma n'ụzọ ụwa n'ụzọ nkịtị.
Ọdịnihu njem: Njem Nleta
Oghere abụworo akụkụ ikpeazụ nke ihe a kpọrọ mmadụ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na anyị zọrọ ụkwụ na ọnwa afọ iri gara aga, Onwebeghị ihe dị mkpa iji mee ka ọha na eze nwee nkasi obi. Ugbu a ọ bụ ezie, enwere mgba na-aga n'ihu iji mee ka ndị mmadụ bata, maka ntụrụndụ. Nleta oghere bu ihe ozo di egwu, ma mgbe ọ nwere ike ịdị ọnụ ma bụrụkwa onye iche, ọ bụ nnukwu nzọụkwụ maka ọdịnihu, nke ga-emetụta ya niile agbaze Mars ma ọ bụ mee ebe obibi obibi ebe ọtụtụ narị mmadụ nwere ike ibikọ ọnụ. Otú ọ dị, ebe ndị sayensị nwere ike were nzọụkwụ na ụzọ ziri ezi, Anyị nwere ike ichere ruo ọgbọ ole na ole tupu ọhụụ ọ bụla a na-ahụ anya na-apụta ìhè.
Dusseldorf na-enweta tiketi tiketi Munich
Dresden na Munich tiketi
Paris na-aga Paris na Munich
Bonn na Munich tiketi
Njem njem na njem: Obere ụgbọala
Jụọ mmadụ ọ bụla banyere echiche njem ha maka ọdịnihu, ha yikarịrị ka ọ ga-ekwupụta ụgbọ ala ndị na-enweghị ụgbọala. Enwere ugbua ụgbọ oloko gburugburu ụwa na-arụ ọrụ na ụkpụrụ a. Ọzọkwa, nke kacha ogologo, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị isi ụlọ ọrụ na-agba mbọ na-eme ka okporo ụzọ dị mma site na ịgụnye teknụzụ n'ime ụbọchị anyị ahụmịhe ịnya ụgbọ ala. Ihe na-eme ka ụgbọala ndị na-enweghị ụgbọala baa uru bụ echere bụ na ọ ga-agbagha ụlọ ọrụ kpamkpam n'ọtụtụ ụzọ. Site na inwetakwu environmentally friendly gaa nchekwa okporo ụzọ, Ndị mmadụ ga-enwe ike ikpuchi ebe dị anya n'enweghị nsogbu nke ịnya ụgbọ ala.
Amsterdam na Paris maka tiketi
Tiketi si London na Paris
Rotterdam na Paris maka tiketi
Brussels na Paris maka tiketi
Ọdịnihu njem: ụgbọ oloko
Otu n'ime ndị kacha ochie ụdị nke ụgbọ njem ọha gburugburu, insgbọ oloko ka nwere ọnọdụ anyị n'ọdịnihu. N'ụzọ dị ịtụnanya, ikekwe karịa mgbe ọ bụla. Ọbụna dị ka e mepụtara teknụzụ ọhụrụ iji mee ka usoro ụgbọ okporo ụzọ dị nchebe, Ọsọ ọsọ, ọzọ adaba, ihe dị mkpa maka usoro dị otú a ga-abawanye n'ike-n'ike. Insgbọ oloko abụrụlarịrị ihe nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ndị bara ọgaranya na-agba ọsọ n'akụkụ ndị kachasị daa ogbenye na klas na-arụ ọrụ mana n'ihi mmụba nke ọnụ ọgụgụ ụwa niile ngwa ngwa., tumadi na mba ndị mepere emepe, usoro ụgbọ oloko dị irè ma dị ọnụ ala ga-adị mkpa iji lụba mkpọchi okporo ụzọ. Nke a ga - abụkwa nnukwu mmetụta na gburugburu ebe obibi n'ihi na ụgbọ oloko ga - enwe ike na - arụ ọrụ nke ọma na ike dị ọcha ma n'otu oge ahụ na - ewere obere ụgbọala dị egwu gas n'okporo ụzọ na. na-ebelata ikuku ikuku CO2.
Munich na tiketi Zurich
Berlin na tiketi Zurich
Basel na tiketi Zurich
Tiketi na Vienna na Zurich
A na-akọwa Hyperloop dị ka “ụdị usoro mbu njem ọhụụ 100 afọ. ” Ọ na-agụnye ime njem dị omimi n'ime paiti, na-ejikọ otu ebe na ibe ya. Enwere ike iji Hyperloop ebufe ma ibu na ndị mmadụ. Otú ọ dị, n'agbanyeghị na Enlonikal Elon Musk bụ isi nke teknụzụ a, mba ụfọdụ bụ obi abụọ banyere Hyperloop ọ bụrụkwa na ọ bara uru itinye ego. Ka o sina dị, njem n'ụdị njem ụgbọ njem a dị nso na eziokwu karịa ka anyị tụrụ anya, na ule na owuwu tubes na-aga n’ihu na California na ike Europe n’oge na-adịghị anya.
Hamburg na Copenhagen
Zurich na Hamburg tiketi
Hamburg na tiketi nke Berlin
Rotterdam na Hamburg tiketi
Nke a bụ maka ndị njem ụkwụ oche, Ọ na-atọ gị ụtọ ileta ebe ọhụrụ ma na-ahọrọ ime nke ahụ site na nkasi obi nke ụlọ ha. Ọ bụ ezie na VR abanyelarị azụmahịa, oge adịghị anya, anyị ga-ahụ njikọta n'etiti VR, IR, na AR, na-eduga na ahụmịhe nke dị nso na ndụ n'ezie ka enwere ike. Site na ileta ihe ịtụnanya asaa nke ụwa rue itinye aka na Great Barrier Reef, Teknụzụ ọhụụ a ga - enyere ndị mmadụ aka ịhụ ụwa dịka ọ dịtụbeghị mbụ.
Milan na tiketi Rome
Florence na Rome tiketi
Pisa na Rome tiketi
Naples na tiketi maka Rome
Anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta nhọrọ tiketi kacha mma dị. Nye iwu ka ụgbọ oloko gị jiri ya Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Ọdịnihu njem” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/future-of-travel/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime ụgbọ okporo ígwè anyị ụzọ ọdịda ibe.
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ma inwere ike dochie pl na fr ma ọ bụ nl na ọtụtụ asụsụ ị họọrọ.
FutureofTravel SpaceTourism TrainSystems Train Travel TravelandTransportation
I have been writing about finance, travel and tech for various publications for eight years now but my love for the niches themselves go back to childhood. i love all sorts of topics but none more so than the holy three of finance,travel and tech - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
5 Best Adọrọ N'ihi na Na Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Sept 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Mee 2021Jun 2021Jul 2021Ọgọst 2021